Midowga Yurub oo RW Cumar ugu baaqay soo dhisidda xukuumad loo dhanyahay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Midowga Yurub ayaa ugu baaqay raysul wasaaraha inuu sida ugu dhaqsaha badan ku soo dhiso gole wasiirro oo loo dhan yahay, kaas oo hanan kara kalsoonida dadka Soomaalida iyo beesha caalamka.
“Labadii sano ee la soo dhaafay, horumar ayaa la sameeyay, balse iyadoo 20 bil ay ka harsan tahay doorashooyinka 2016, howlaha na hor yaalla waa culus yihiin, waxayna u baahnaan doonaan go’aan adag iyo hoggaan xil-kas ah,” ayuu Danjire Cervone ku yiri qoraal loo diray warbaahinta.
Midowga Yurub ayaa ku dhiirri-geliyay dhammaan qeybaha ay khuseyso siyaasadda Soomaaliya inay si wada-jir ah ugu istaagaan sidii loo sii hayn lahaa waddada horumarka iyo abuurista qorshe Midowga Yurub iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ay u sii wadi karaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin.
Midowga Yurub ayaa rajeynaya inuu wada-shaqeyn dhow la yeesho xukuumadda cusub ee uu hoggaamin doono raysul wasaare Cumar Cabdirashiid.